आशा लघुवित्तको मुनाफा २६७ प्रतिशतले बढ्यो, प्रतिशेयर आम्दानी कति ? - नेपालबहस
आशा लघुवित्तको मुनाफा २६७ प्रतिशतले बढ्यो, प्रतिशेयर आम्दानी कति ?
| १०:४५:४१ मा प्रकाशित
२१ बैशाख, काठमाडौं । आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा मुनाफा बढाउन सफल भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा २ करोड ९० लाख रुपैयाँ मुनाफा गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा लघुवित्तले १० करोड ६७ लाख रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ । जुन गत वर्षको तुलनामा २६७ प्रतिशतले धेरै हो।
लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी ७८ प्रतिशतले बढेको छ भने सञ्चालन आम्दानी ५५ प्रतिशतले बढेको छ जसले गर्दा लघुवित्तको नाफा बढ्न टेवा पुगेको देखिन्छ।
समीक्षा अवधिमा १५ प्रतिशतले पूँजी बढाएको लघुवित्तको प्रतिशेयर आम्दानी पनि १६ रुपैयाँबाट बढेर ५३ रुपैयाँ पुगेको छ। उसको प्रतिशेयर नेटवर्थ १५७ रुपैयाँ रहेको छ। लघुवित्तको निक्षेप र कर्जा लगानी क्रमशः ६३ प्रतिशत र ६० प्रतिशतले बढेको छ भने खराब कर्जा पनि घटेको छ।
बारामा घाँटी रेटेकाे अवस्थामा २ बालकको शव फेला ! ३ मिनेट पहिले
एमाले कार्यदलको बैठक आज बस्दै १२ मिनेट पहिले
ओलीको सपथविरुद्ध परेका रिट प्रधानन्यायाधीश आफैंले हेर्ने २२ मिनेट पहिले
संसदबाट नीति कार्यक्रम पास नुहुने र वैकल्पिक सरकार पनि नबन्ने देखियो: भट्टराई ४० मिनेट पहिले
कर्णालीमा एक करोड राशिको पत्रकार कल्याण कोष ४३ मिनेट पहिले
राष्ट्रियसभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि आयोगमा पाँच दल दर्ता ३ हप्ता पहिले
ज्यानमारा भाइरसले सुदूरमा एक वर्षीया बालिकासहित थप चारको ज्यान लियाे ३ हप्ता पहिले
न्याय परिषद सचिवालय बन्द २ हप्ता पहिले
दरबार सङ्ग्रहालयमा भित्रिन थाले पर्यटक ५ महिना पहिले